1.Why Windows tirka Updated Files
2.How in ay tirtirto Windows Update Faylal ay dhowr tallaabo oo
3.Tips & Tricks u tirtiro Windows Update Files
Tirtirka ee Update Windows faylasha la sameeyo iyadoo ujeedadoodu tahay in ay helaan meel dheeraad galay hardware computer ee, in la baabi'iyo faylasha kharribeen iyo dhacsan. Windows Update waxaa socda in backend la soo noqnoqoshada soo xulay user Windows ah. Haddii aadan soo xulay update joogto ah, marka updates Windows waa la heli karaa, aad ogeysiin suuqa kala ogeysiin ah. Sida caadiga ah waxaa la isugu gudbiyo macluumaadka la xidhiidha baaxadda updates ah. Waxaad ogaan doontaan sida badan meel aad u baahan tahay casriyeysan.
Nidaamka 8 hawlgalka Windows 7, ama Windows u baahan yahay 16 GB meel disk adag diyaar u version 32-yara, ama 20 GB u version 64-bit ah. Waxaa lagu talinayaa inaad boos lacag la'aan ah ee 40 - 50 GB on Risaalo ka aad doonayso in aad ku rakibi Windows, si ay u leeyihiin meel ku filan casriyeysan, sidoo kale.
Qaybta 1aad Windows Maxaad tirka Updated Files
Sababaha tirtirka ee Update faylasha waxaa lagu helo meel bannaan oo dheeraad ah oo ku drive adag, files waxaa u kharribmay oo keeni computer, iyo mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan waa in Windows ma sameeyo nadiifinta kasta oo laftiisa ka dib markii nidaamka. Files dhacsan iyo / ama ku kharribeen siin madax xanuun aad u badan, in aanu si adag u qabaa ilaa siiyaan kombiyuutarka iyo mid kale oo ka iibsan (laga yaabaa in la nidaamka qalliinka oo kale). Laakiin ma waxaan u leeyihiin in ay ilaa iyo haatan ku hardiyi wax sababtoo ah xal sixid jiraan xitaa nidaamka Windows hawlgalka.
Cabbirka for update files kala duwan oo ku xiran version ee Windows aad leedahay on your computer, iyo wararka aad doonayso in aad qabato. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay Windows 8, waxaad u baahan tahay 3000 MB ee meel laga heli karo si loo soo dajiyo version 32-yara ee Windows 8.1 ah, iyo 3850 MB ee meel laga heli karo si loo soo dajiyo version 64-yara ee Windows 8.1 ah.
Part 2 Sidee in ay tirtirto Windows Update Faylal ay dhowr tallaabo oo
Waxaad isticmaali kartaa Nadiifinta digsi iyo muujinta Nadiifinta Windows Update si ay u tirtirto Windows updates in aadan u baahnayn oo kaliya degan kaydinta in aad ka faa'iidaysan kartaa files si dhab ah aad u baahan tahay.
Raac tallaabooyinka hoose si aad u nadiifinta Windows Update Files:
1. Open Disk saaxir Nadiifinta
Tag bilow, raadinta ka dib All Programs menu, guji Accessories, iyo ka dib riix Tools System. Tallaabada ugu dambaysaa waxay tahay in la guji Nadiifinta digsi.
Nadiifinta 2. Run Windows Update
Doorashada Nadiifinta Windows Update waxaa lagu hubiyaa iyadoo default. Sidaas darteed, marka aad isticmaasho Nadiifinta Disk ah, tab tani mar hore uu diyaar u yahay in la isticmaalo.
3. tirto faylasha Update ah
Waxaad la keeneen in doonaa daaqadaha ogeysiis ah oo waa in aad si guji tirto faylasha.
Part 3 Talo & Tricks u tirtiro Windows Update Files
Waxaad awoodaa inaad tirtirto Windows Update Files adigoo isticmaalaya Nadiifinta digsi oo keliya haddii aad haysato ogolaanshaha maamulaha. Haddii aad hesho qaar ka mid ah farriinta in aadan haysan mudnaan tan, guji badhanka midig ka mouse dooro Run sidii Maamulaha.
The saaxir Nadiifinta Disk waddaa ee asalka ah oo aad weli shaqeyn karaan on your computer. Si kastaba ha ahaatee, maskaxda ku hay in aad computer la bilaabi doono kiisaska intooda badan ka dib markii nadiifinta faylasha loo sameeyaa.
Waxaad ogaataa in Windows Update ikhtiyaarka Nadiifinta waa la heli karaa oo keliya marka saaxir Nadiifinta digsi ku ogaadaa updates Windows in aadan u baahan kombiyuutarka. Sidaas darteed, xitaa haddii aad u malaynayso in aad qabto update files in aanad u baahnayn mar dambe, Windows "qabaa" yaabaa kala duwan. Marka aad ah uma arkaan in doorashooyinkan waa la heli karaa, u badan tahay waa in aad hubiso labo jeer faylasha aad ka fiirsan in ay tirtirto.
> Resource > Windows > Habka ugu sahlan oo dhakhso ah si ay u tirtirto Windows Update Files